Maareeyihii Shirkada Golis oo Xilka ku wareejiyay Maareeye Cusub+Sawiro – SBC
Maareeyihii Shirkada Golis oo Xilka ku wareejiyay Maareeye Cusub+Sawiro
Munaasabad Balaaran oo siweyn loo soo agaasimayay islamarkaana xilalka ay ku kala wareegayeen Maareeyiha Shirkada Golis Aadan Sheeqdoon Cali iyo Maareeyaha cusub ee Xilka la wareegaya Cali Xaaji Warsame ayaa lagu qabtay xarunta Shirkada ee Magaalada Boosaaso.
Munaasabadan ayaa waxaa goob joog ahaa masuuliyiinta sar sare ee Shirkada Golis, marti sharaf, shaqaalaha shirkada iyo saxaafada, waxaana hadalo ka soo kala jeediyay ugu horeyn masuuliyiinta Xilka kala wareegayay.
Aadan Sheeqdoon Maariyiha xilka wareejiyay ayaa halkaasi ka hadlay waxaana uu ka warbixiyay heerarkii ay shirkada Isgaariinta Golis Soomartay, isagoona mahad balaaran halkaasi ugaga jeediyay ka soo qeybgalka madaxda halkaasi ku sugneyd una hambalyeeyay Maareeyaha cusub eexilka la wareegaya.
Cali Xaaji Warsame oo ah Maareeyaha Cusub ee Shirkada Golis ee maanta xilka la wareegay ayaa halkaasi isna ka jeediyay hadal isagoona halkaasi ka cadeeyay in xilkii uu si toos ah kala wareegay maareeyihii hore ilaaheyna ka baryay in uu u fududeeyo xilka loo dhiibay.
Munaasabada ayaa waxaa hadalo kala duwan ka jeediyay martisharaftii halkaasi ku sugnayd oo ay ka mid ahaayeen Culimaa udiinka Waxaana ka mid ahaa sheeq Daahir Aw Cabdi oo halkaasi ka jeediyay hadalo ku aadan islaamka sida uu u weyneynayo xilalka iyo Masuuliyada.
Waxaa isna halkaasi hadal ka jeediyay gudoomiyaha Gudiga Aasaa sayaasha Shirkada Golis C/casiis Guureeye Kaarshe isagoona amaan iyo bogaadin u jeediyay Maareeyihii hore ee Shirkada Golis Aadan Sheeq doon cali una hambalyeeyay Maareeyaha Cusub ee Xilka la wareegay .
oday xanshaqa says:
prof Adan shiikhdoon waa soo halgamay in kastoo uu shaqada u badiyey Qabaa ilada tunka weyn waxaanse cadeynaYNAA in uu shirkada mudadii uu hayyey ay kor ukacdey .
Maxamud Sh Axmed says:
Aadan Shiikhdoon amaan ayuu mudanyahay, waxa uu shirkada ka qabteyna waa horumar sida qoraxda u muuqda, shaqaaleynta shirkadduna waxay ku saleysnayd aqoon iyo amaano qofkii leh in loo qaato,
Maareeyaha cusubna waxaan u rajeynayaa guul.
Shirkadda Golis na waa in la ogaadaa dhaqaalaha Puntland saameeyn wayn ayey ku leedahay oo dhinaca dhaqan dhaqaalaha, siyaasadda, amaanka iyo horumarka ah, waana in dowladdu si gaar ah u ilaalishaa sababtoo ah dhaqaalihii ummada ayaa meesha ku jira.
Arrinta kale oo Muhiimka ah waa wareeggii lacagta dalka in ay shirkaddu xanibtay arrintaas dhibaato ayey dhaqaalaha ku tahay waa in laga fekeraa sidii dib loogu soo celin lahaa lacagta faraha badan ee ku xaniban bankiyada shirkadda Golis ee aan wax dhaqdhaqaaqa sameynayn oo shacabkana culeyska ku ah,
Maalgelinta uu Sameeyo Bankiga Salaam ee Golis waa qaali, dad yar ayaana ka faa’ideysan kara, Golis iyo dowladuba waa in ay arintaa gadaal u fiiriyaan.
Markale hambalyo maareeyaha cusub ee Golis Cali Xaaji Warsame
hambalyo hambalyo hambalyo ayaan leeyahay abtiga cali xaaji warsame ilaahay hakuufududeeyo ayaan leeyahay xilka lagu saaray amin amin amin